Tsangadzi sezvipfuwo zvemhuka Mapeji evaravara ehurukuro
Tsangadzi semhuka dzemhuka - Makomborero
Uyo anosarudza kuva segandanyama semhuka yemhuka, anofanira kuziva kuti haasi chido chekudya. Chikara chinogona kuiswa pane dzimwe nguva, asi kunyanya mhuka inofarira kusagadzikana kugara mu terrarium.
Kana ruoko ruchisvika kune terrarium, izvi zvinokonzera kushungurudzika kwevanga, uye mhuka inogona kuruma. Iyo terrarium inoshandiswa nayo tsandanyama inofanira kuva nechitsiko che 30 × 40 centimeters. Iyo yakakwirira inofanira kufanana kusvika ku 50 centimeters. Munguva yekudhonza, mhuka haifaniri kudyiwa.
Kana zvisina kudaro, chikafu chevangororo chinosanganisira zvipembenene uye mahara arachnids, zvakadai semhashu dzinogona kutengwa muzvitoro zvezvenyanzvi. Mukuwedzera, nguva dzose mvura yakakwana inofanira kuwanikwa. Mifungiro evakororo ndeye nyore. Mhuka hadzidi kutonhora zvakanyoro uye segark mulch sepasi.
Ndezvipi zvitsva zvinokodzera kuchengeta?
Inonyanya kufarirwa mhando madandaude sezvo dzinovaraidza, ndivo tsvuku Chile tarantula, uye Rotfußvogelspinne uye Mexican Rotknie tarantula. Iyo yekare yakasvika masendimita matanhatu kusvika matanhatu uye ine rugare uye yakasimba. The tsvuku Chile tarantula inokura zvishoma nezvishoma uye wambomira zvishoma kwenguva nezvokudya. Zvokudya zvakasarudzwa zvepacidha iyi ndezvipembenene uye nesting mice.
Chigoni-tsvangira tsvina tsvuku ndeyomuti tsanga tsvina nemakore kusvika kumakore 15. Zvokudya zvinosarudzwa zvechigandanyama zvinokonzerwa nemhashu kana mapuro. Uyewo, tarimila yeMexico ine korona yakatsvuka yakakurumbira semhuka uye inonyanya kufanirwa nevatangi vekutanga sevangara rakanaka kwazvo. Anodyiswa nemakakati kana mhashu.
Zvipfeko zvinodhura chii?
Zvichienderana nemhando uye zvisikwa uye zvisikwa, tarantula inodhura kusvika ku200 Euro. Iyo terrarium inoda kuti spider iwane mari pakati pe gumi nemakumi mashanu ema euro, zvichienderana nehukuru hwayo. kusvika kuzasi, 15 liter bark mulch, kurarama mhuka dzekudya.
Tsangadzi dzakachena uye dzakanyarara
Haudi nzvimbo yakawanda yekurarama
Kurinda magwenzi kunonakidza
Vanhu vazhinji vanozvinyengedza pachavo nevangoro uye vane arachnophobia chaiyo. Chero ani ane gurusi sechipfuwo, anofanirwa kutarisira kushanya ikoko, uyo anouya kumba achibva kumachenjeri anosemesa, "achimhanya-famba" ipapo. Chero shoko rokuti spider rinokonzera kusagadzikana zvakanyanya uye kutya kwevanhu vakawanda.
Zvinyararire zvinokambaira vhudzi "vatsoropodzi" vanokamba-famba pasi, saka vazhinji vanogadzira zvinyorwa. Nokuda kwechikonzero ichocho iwe haufaniri kugara uchiudza muenzi wacho kuti iwe une spider semhuka.
Doro sey aphrodisiac - erotic